Dowladda Soomaaliya oo iska fogaysay in ay weerar ku tahay Saadaq Joon | Aftahan News
Muqdisho (Aftahannews) – Wasiirka amniga Soomaaliya, Xasan Xundubey ayaa sheegay dowladdu in ayna wax dan ah ka lahayn in ay tallaabo ka qaado taliyihii hore ee ciiddanka booliiska gobolka Banaadir, Saadaq Joon.
Wasiirka Amniga Soomaaliya, Xasan Xundubey
“Dowladdu waxay ku baaqaysaa in dadka buunbuuninaya in weerar lagusoo yahay Saadaq Joon, ay arrimahaas faraha kala baxaan, oo ay ogaadaan in haba yaraatee ayna dowladdu u qorshaysnayn wax tallaabo ah,” ayuu yidhi wasiirka amniga Xundubey.
Dhinaca kale, wasiirka amniga ayaa ku eedeeyay dad masuuliyiin ah oo ay xildhibaano ku jiraan in ay ka shaqeynayaan sidii loo kala furfuri lahaa ciidamada Soomaaliya. Wuxuuna sheegay in aan xilligan loo baahnayn in ciidamada dib loogu celiyo maleyshiyaad.
Hadalka wasiirka amniga ayaa ku soo aaday xilli ay Muqdisho ka taagan tahay xiisado colaadeed oo ka dhashay ka dib markii ay soo baxday in dowladdu weerar ku tahay Saadaq Joon oo farriisin ciidan ka dhigtay aagga Shiirkole.